UMphathiswa uBartlett uKhokela kwiNdibano Jikelele ye-UNWTO ebalulekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » UMphathiswa uBartlett uKhokela kwiNdibano Jikelele ye-UNWTO ebalulekileyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iintlanganiso • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Mhlonishwa. UEdmund Bartlett
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett, umke esiqithini izolo esiya kuzimasa iseshoni yamashumi amabini anesine yoMbutho weZizwe eziManyeneyo woKhenketho lweHlabathi (i-UNWTO), eya kubanjelwa eMadrid, eSpain, ukusuka ngomhla wama-30 kweyeNkanga ukuya kumhla wesi-3 kweyoMnga, ngowama-2021.
INdibano yeZizwe eziManyeneyo iya kugxila kutshintsho, kwimfundo, kuphuhliso lwamaphandle, kunye nendima yokhenketho kuhlumo olubandakanyayo. Ukongeza, inkqubo ibandakanya ukuvunywa kwezilungiso ezicetywayo kwi-UNWTO Affiliate Membership Framework, i-UNWTO Students' League finals, kunye ukuqeshwa kukaNobhala Jikelele we-UNWTO kwixesha le-2022-2025.
“Umnyhadala uza kuba noKhuphiswano lweVidiyo, olubandakanya amacandelo amabini: Iintsomi eziKhethekileyo zokuZimela kwezoKhenketho kunye neNkuthazo yezoKhenketho kunye neshumi leminyaka lokuSebenza. INdibano yeZizwe eziManyeneyo yindibano ephambili ye-UNWTO kunye nendawo yaMazwe angamaLungu ukuba amkele inkqubo ye-UNWTO yeminyaka emibini kunye nohlahlo lwabiwo-mali luka-2022-2023,” watsho uMphathiswa.
I-UNWTO inamazwe angamalungu angama-159, kunye neNdibano Jikelele ibe ngumbutho ophezulu we-UNWTO. Iiseshoni zayo eziqhelekileyo zibanjwa rhoqo emva kweminyaka emibini kwaye zizinyaswa ngabathunywa bamaLungu aPheleleyo naManyeneyo.
“INdibano kaWonke-wonke yeyona ntlanganiso ibalulekileyo yamagosa aphezulu kwezokhenketho kunye nabameli becandelo labucala abakwinqanaba eliphezulu kwihlabathi liphela. Yindibano ephambili ye-UNWTO kwaye idibana ukuze yamkele uhlahlo lwabiwo-mali nenkqubo yomsebenzi kunye nengxoxo-mpikiswano ngezihloko ezibaluleke kakhulu kwicandelo lezokhenketho,” ucacise watsho uMphathiswa uBartlett.
Ukhenketho lwaseJamaica Umphathiswa uBartlett kulindeleke ukuba abuyele esiqithini nge-5 kaDisemba, 2021.